Enwere ike iji igwe oyi dị ọkụ maka oge oyi? | Lianchuang
Enwere ike iji igwe oyi dị ọkụ maka oge oyi?
Enwere ike iji igwe oyi maka kpo oku n'oge oyi. A na-ekewa ndị na-agba ume ikuku n'ụdị abụọ: otu bụ otu ngwa nju oyi nke ikuku oyi, nke ọzọ bụ oyi na ikpo ọkụ nke okpukpu abụọ. Enwere ike ịbunye naanị nke mbụ, na nke ikpeazụ nwere ike ọ bụghị naanị refrjiraeto kamakwa ọ na-ekpo ọkụ, mana ọnụahịa dị oke ọnụ karịa ma e jiri ya tụnyere.
Nlekọta maka iji ọrụ kpo oku nke igwe ikuku oyi n'oge oyi:
1. Mgbe ị na-agba mmiri, jiri mmiri dị ọcha dịka o kwere mee iji belata uto nke nje bacteria n'oge usoro odide. Tụkwasị na nke ahụ, mmiri dị na tank kwesịrị ịgbakwunye ugboro ugboro ma dochie ya mgbe niile.
2. Mgbe ikuku oyi na-agba ọsọ ruo ogologo oge, nkwụsị nke ájá na unyi ga-emetụta oke ikuku na mmetụta dị jụụ nke nzacha na ákwà mgbochi ikuku. Ọ kachasị mma ihicha ya kwa izu abụọ.
3. Mgbe ị na-eji ndị na-ekpo ọkụ ikuku, ebe dị anya ekwesịghị ịdị oke nso. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tụlee iji ụfọdụ dehumidifiers ma ọ bụ dehumidification ụlọ ọrụ.
Igwe oyi na-ekpo ọkụ nwere okpomọkụ nke 5-6℃ dị ala karịa ndị Fans nkịtị. Ha nwere ikike oriri dị ala na ọnụ ala dị ala. Ngwaahịa ụfọdụ nwekwara ọrụ nke ikuku ikuku ma gbakwunye ion na-adịghị mma. Ha pere mpe ma dịkwa mfe ịkwaga. Ọ bụ ngwa nju oyi thana fan, na ewe obere ike ka ikuku ikuku. Nke abuo, ikuku conditioner ofufe nwere ọrụ dịgasị iche iche (na-adịghị mma ion / kpo oku ikuku, wdg), nke bụ adaba ịkwaga.
Egbu, n'okpuru abụọ ụdị nke ikuku oyi na okpomọkụ bụ maka gị akwụkwọ. Anyị nwere olile anya na ị ga-enwe mmasị na ha.
Nodị no. DF-AF2808Khttps://www.gdszlian.com/df-af2808k-portable-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- na-oscillation-mbughari-mmiri-tank-2-okpomọkụ-mwube-eco-ọrụ-imd-akara-ngwaahịa /
Nodị no. DF-AT2501KG1https://www.gdszlian.com/df-af2501kg1-tower-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- na-oscillation-90oscillation-2-okpomọkụ-mwube-eco-ọrụ-aka-akara-ngwaahịa /